पुरानै संक्रमितलाई आइसोलेसन छैन, नयाँलाई कता राख्ने ?:: Mero Desh
पुरानै संक्रमितलाई आइसोलेसन छैन, नयाँलाई कता राख्ने ?
Published on: ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १४:४०
नेपालगन्ज : बाँकेमा नरैनापुरका ५९ जनालाई ७२ घण्टाभित्र पनि आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै बुधबार थप ६ जना नयाँ संक्रमति पुष्टि भएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएको २४ देखि ३० घण्टामा नरैनापुरका संक्रमितलाई मंगलबार राति १० बजेसम्म नेपालगन्जमा ल्याइएको
थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको २५ जना क्षमता रहेको लायन्स डेन्टल अस्पालतको आइसोलेसनमा मंगलबार रातभर र बुधबार दिनभर ५९ जनालाई राखिएको थियो। जहाँ २५ जनालाई मात्र राख्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले नवजात शिशुसहितकी महिलालाई दिउँसो खजुराको क्यान्सर अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा पठाएको बताए। ‘सबै संक्रमित मात्र रहेकाले सामाजिक दूरी’ नचाहिने भन्दै ५८ जनालाई एकै ठाउँमा राखिएको हो।
बुधबार अपरान्हसम्म आइसोलेसनबारे टुंगो नलाग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नरैनापुर गाउँपालिकाका ५ र खजुरा गाउँपालिकाका एक जनामा कोरोना पुष्टि गरेको थियो। सोमबार नरैनापुर ५ को नमूना प्रावि मोतिपुरका ९६ जनाको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएकामध्ये १६, २०, २८, ३० र ४० वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नरैनापुरमा मंगलबार मात्र एक सय ५८ जनाको थप नमूना संकलन गरिएको थियो। यी सबै नमूनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
भेरी अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.प्रकाशबहादुर थापाका अनुसार खजुरा गाउँपालिका ५ बाट भने ३ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा २७ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बाँके जिल्लामा नरैनापुरमा मात्र ७३, नेपालगन्जमा २५ र खजुरामा एक गरी ९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नरैनापुर ५ मा २५ वर्षका एक युवकको कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ।
बुधबार नरैनापुर गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा केही ब्यक्तिले आफन्तहरुलाई घरमै राख्नुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए। उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अमहद शाहलाई पनि सो व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै कोरोना सार्ने चेतावनी दिएका थिए। सोही समूहले मंगलबार संक्रमितहरुलाई नेपालगन्ज ल्याउन लाग्दा पनि अवरोध गरेको थियो।